QISADA JACEYLKA Isbuuca KOBCIYE.COM Iyo Qiso Ka Yaabisay Bulshadii Aay Soo Gaartay, Ma Aragtay Qisadan Oo Kale… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
QISADA JACEYLKA Isbuuca KOBCIYE.COM Iyo Qiso Ka Yaabisay Bulshadii Aay Soo Gaartay, Ma Aragtay Qisadan Oo Kale…
Published: April 10, 2017, 1:05 am
Wuxuu si aad ah u jeclaa Xaaskiisi. Waxay heysteen laba caruur ah. Wax kasta uu awoodo wuu siin jiray balse xaaskiisu marnaba maqsuud kuma ahayn. In kastoo ninku uusan taajir ahayn hadana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta uu heli karay Hadduu u soo iibiyo dhar waxay ku oran jirtay waxan waa wax liita oo mar hore laga baxay. Ninku wuu u dhoolacadeyn jiray xaaskiisa wuxuuna ku oran jiray “Maalin, ayaan taajir noqon doonaa waxaana kuu iibin doonaa dhamaan waxyaabaha qaaliga aad u baahan tahay”
Haweenaydu marnaba telephone kama wici jirin ilaa mar ay wax ka codsaneyso maahee, haddii uusan fulin karin codsigaa, waxa keliya ay sameyn jirtay waa inay muranto maalmo, marmarna dagaalanto.
Galab, isagoo shaqadiisi ka soo rawaxay ayuu soo iibiyay hal Kilo oo hilib ah isagoo faraxsan oo is leh xaaskaaga ka yaabi maanta oo caawa si fiican reerku ha u casheeyo. Kolkuu gaaray gurigi oo uu xaaskiisi tusay, “Ah! Nin baad sheeganaysaa oo hal kilo hilib ah guriga keenaysaa, ma saliid baa taal & wax kale oo lagu daro? ka dibna banaanka ayay ku tuurtay hilibki. Ninki aad buu u carooday balse wuu is dejiyay wuxuuna is yiri marnaba hoos u dhigin jaceylka aad reerkaaga u qabto.
Maalin ayuu xanuun badan ka dareemay cagta bidixda ka dibna Buro weyn ayaa ka soo baxday. 3 Bilood ka dib marki ay aad u weynaatay xanuunkina ku batay ayuu Cusbitaal tagay, waxaana laga helay Cancer. Wuxuu ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan. Inkastoo aad u xanuunsanaa hadana wuxuu isku dayay wax kasta uu awoodo inuu reerkiisa quudiyo.
Laba sano ka dib, xaaladiisi way ka sii dartay waxaana la dhigay cusbitaalka, lugti ayaa qaliin lagu sameeyay oo laga jaray laakiin nasiib darro waxay ahayd xilli dambe, virus-ki wuxuu saameeyay jirkiisi oo dhan. Wuxuu u yeeray xaaskiisi si uu ula dardaarmo wuxuu ku yiri, “Xanaanee oo daryeel caruurta, waxaan dareemayaa inaan aduunkan ka socdo. Allaha idin dhawro”
Wuxuu neefsaday tiisi u dambeysay, wuuna geeriyooday. Haweenaydi & labadiisi caruur waa ooyeen, maalmo ayay baroordiiq ku jireen. Laba bilood ka dib ayay xaaski booqatay Qabrigiisi way ag fariisatay iyadoo leh erayadan:
“Jaceylkeygi, wax kasta oo wanaagsan waad ii sameysay, waxaad iila dhaqantay si sare, laakiin wixi keliya aad iga helaysay waxay ahayd muran & dagaal aan dhamaad lahayn. Marnaba ma garowsan muhiimadaada & jaceylkaaga ilaa hada oo aad naga tagtay, goortii aan aniga noqday qofka laga rabo cuntada, dharka, Biilki, waxbarashada & waxyaabo kale oo badan. Waan xasuustaa goortii aan tuuray Kiiladi hilibka laakiin hada ma hayo xitaa nus kilo meel aan ka helno!
Dhamaanteen waan tabeynaa maqnaanshahaaga hada, gabadhaadi yareyd oohin ma joojiso iyadoo i weydiinaysa Aabaheed! Allaha kuu Naxariisto.
1. Had & Jeer ku qanacsanow oo ka mahadceli wixi lagu siiyo, haday yar tahay ama weyn tahay
2. Jaceylku ma aha wax badan inaan heysano balse waa sida la isula wadaago waxa yar ee la heysto
3. Kuwa xiriirka idinka dhaxeeyo kula hadal mar kasta hadalo wanaagsan inta ay noolyihiin. Qofna ma garanayo xilliga uu Dunidan ka tagayo
4. Marnaba ha ku ciyaarin dareenka qof ku jecel, ha dhaawicin qalbigooda sababtoo ah hubaashi maalin intaad baraarugto ayaad garan doontaa inaad dayaxa weyday kolki aad xidigaha tirineysay.
FARQI Yaab Leh Oo U Dhaxeeyo Fariimihii Hore Ee Jaceylka Iyo Kuwa Maanta Leysku Qoro…!!
DAAWO: Dr Xabeeb oo ujawaabay dad ka horyimid guurkiisa & Iyo Qisada Xaaskiisa Sundus..